Luster, imwe yemafaira masisitimu anoshandiswa mumasumbu uye makomputa makuru | Linux Vakapindwa muropa
Luster Iyo yakavhurika Sosi yakaparadzirwa faira system, kazhinji inoshandiswa mumasumbu makuru. Iri zita musanganiswa weLinux uye masumbu.
Iyo purojekiti kuyedza kupa iyo faira sisitimu yemasumbu emakumi emakumi ezviuru emahodhi ane petabyte ekuchengetedza chinzvimbo, isina kukanganisa kumhanya kana kuchengetedzeka, uye inowanikwa pasi peGNU GPL.
Cluster File Systems ndivo vanogadzira, vanogadzira uye vanochengeta Luster nemipiro kubva kune mamwe makambani nevanhu vamwe nevamwe.
1 Nezve Luster
2 Shanduro nyowani yeLuster
2.1 Huru zvinyorwa zvitsva zveLuster 2.12
Mazhinji emakomputa anomhanyisa pasi rese masango anoshandisa iyo Luster faira sisitimu sekuchengetedza, senge masisitimu muORNL, PNNL, LLNL, uye LANL.
Iyi sisitimu inotarisa yega yega faira yakachengetwa muLuster faira system chinhu. Luster inosvitsa vese vatengi kune akajairwa POSIX semantics uye panguva imwe chete kuverenga nekunyora kuwana kwezvinhu zvakagovaniswa. Iyo Luster faira system ine ina anoshanda zvikamu.
Aya ndiwo Meta data server (MDS) yekuchengetedza metadata; chinhu chekuchengetedza chinhu (OST) kuchengetedza iyo chaiyo data; chinhu chekuchengetedza server (OSS) kubata maOTS; mutengi (s) kuwana uye kushandisa iyo data.
OST ndiwo mabhuroko ekushandisa. MDS, OSS, uye OST inogona kugara panzvimbo imwechete kana pamatanho akasiyana.
Luster haigadzirise zvakananga maOTS, uye inopa basa iri kumaOSS kuti ive nechokwadi chekukanganisika kwemasumbu makuru nemakomputa makuru.
MuMassively Parallell Processor (MPP), mapurosesa anokwanisa kuwana iyo Luster faira sisitimu nekudzosera zvikumbiro zvavo zveI / O kunzvimbo uye nebasa rekutanga basa kana rakagadzirirwa seLuster mutengi.
Kunyangwe iri nzira yakapusa, inowanzo kupa kusaita zvakanaka. Imwe nzira yakaoma kunzwisisa yekupa yakanaka kwazvo kuita ndeye kushandisa raibhurari raibhurari.
Libluster raibhurari-yemanyorero raibhurari iyo inogonesa mapurosesa kukwirisa uye kushandisa iyo Luster faira sisitimu semutengi, ichipfuura redirection kune iyo node yebasa.
Uchishandisa libluster, mapurosesa anokwanisa kuwana iyo Luster faira system, kunyangwe kana iyo node yebasa iyo basa rakatangwa isiri mutengi weLuster.
Libluster inopa nzira yekufambisa dhata yakanangana pakati penzvimbo yekushandisa uye maLuster OSSs pasina kukosha kwekuita kopi yedata kuburikidza nehuremu hwakareruka, nokudaro uchiwana yakaderera latency, uye yakakwira bandwidth mukuwana kwakananga kweva processor kune iyo Luster faira system.
Shanduro nyowani yeLuster
Munguva pfupi yapfuura vhezheni itsva yeLuster 2.12 yakaburitswa nemamwe mabasa matsva uye pamusoro pezvose zvakagadziriswa zvebug zvakawedzerwa kune zvimwe zvekusiyaniswa kweLinux iyo inoshandiswa kune makuru makomputa.
Huru zvinyorwa zvitsva zveLuster 2.12
Nechibuditswa chitsva ichi basa rekupatsanura madhairekitori makuru aripo akagoverwa namespace akawedzerwa (DNE, Yakaparadzirwa Namespace) kubva kune imwe metadata yekuchengetera chinhu (DTM, metadata zvinangwa) kune vazhinji (kupatsanura zvikamu zvakasiyana zveDNE nemaDTM akasiyana).
Iyo nyowani ficha inorerutsa kuunzwa kweMDTs matsva eanenge aripo FSs uye manyore rebalancing yemutoro mu MDT.
Yezve metadata repositori (MDT), iyo "Simbe Saizi« maitiro anoitwa, ayo anotendera iwe kuti udzose nekukurumidza saizi yekufungidzira pachinzvimbo chaiyo saizi chaiyo yemafaira kana uchinyatso tarisa MDT kuburikidza neinjini injini mune mamiriro apo kumhanya kwakanyanya kukosha kupfuura kunyatsoita.
Zvekugadziriswa pamwe neakawanda LNet network maficha, mune iyi nyowani vhezheni yeLuster 2.12 iyo «LNet Network Hutano» basa rakawedzerwa, iyo inoshandisa iyo sarudzo yekuwanazve kuwana RPC kuburikidza neimwe network network kuitira kana ikakundikana kekutanga nguva apo chikumbiro chinotumirwa.
Pamusoro peizvozvo, server rutsigiro yakawedzerwa kune shanduro dze RHEL 7.6 (3.10.0-957.el7) uye SLES12 SP3 (4.4.162-94.69). Wakawedzera rutsigiro rwevatengi rweisina kuburitswa RHEL 7.6 (3.10.0-957.el7), SLES12 SP3 (4.4.162-94.69) uye Ubuntu 18.04 (4.15.0-32) kernels.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Luster, imwe yemafaira masisitimu anoshandiswa mumasumbu uye makomputa makuru